150 ဂျီဟတ်ဝါဒီဆွီဒင်မှပြန်သွားကြပြီ | Apg29
450 online! | Sidvisningar idag: 51 719 | Igår: 151 233 |
150 ဂျီဟတ်ဝါဒီဆွီဒင်မှပြန်သွားကြပြီAftonbladet အတွက်အင်တာဗျူးအတွက် SAPO အကြီးအကဲ Anders Thornberg ကပြောပါတယ်ဖော်ပြသည်။ 150 မွတ်ဆလင်ဂျီဟတ်ဝါဒီဆီးရီးယားမှပြန်လာသောပြီးနောက်ဆွီဒင်မှပြန်သွားကြပြီဖြစ်သည်။ 300 မွတ်ဆလင်ဂျီဟတ်ဝါဒီ 50 ဦးအသတ်ခံခဲ့ကြခြင်းနှင့် ပတ်သက်. 150 SAPO အကြီးအကဲ Anders Thornberg အောက်မှာဆွီဒင်မှပြန်သွားကြပြီ, စစ်မှဆီးရီးယားမှခရီးထွက်ကြပြီ။စစ်ရာဇဝတ်မှု ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က 2016 ခုနှစ်, ဆှီဒငျရဲတပ်ဖွဲ့ကမည်သည့်ယခင်နှစ်ထက်စစ်ရာဇဝတ်မှုပိုတိုင်တန်းသို့ရတယ်, ကပြောပါတယ် ဆွီဒင်ရေဒီယို ။ စစ်ပွဲပြစ်မှုကော်မရှင်ဆီးရီးယားမဆိုင်ပါဘူး 2016 အများစုဟာအကြောင်းကြားစာများအတွက် 63 အကြောင်းကြားစာများစုစုပေါင်းလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ စစ်ရာဇဝတ်မှု, လူသားနှင့်စစ်ရာဇဝတ်မှုဆန့်ကျင်ပြစ်မှုမျိုးဖြုတ်သုတ်သင်မှုဖြစ်ကြသည်။လူတွေကသညျယရှေုလိုအပ်ပါတယ်! သာသူကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းပဲ!အရင်းအမြစ် လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုအကြီးအကဲ: 150 ဂျီဟတ်ဝါဒီကျော်ဆွီဒင်မှပြန်သွားကြပြီ | Aftonbladet
451 online! | Sidvisningar idag: 51 720 | Igår: 151 233 |